Daangaa Beenishaangul Gumuzitti 'guyyaa tokko qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’ - BBC News Afaan Oromoo
Daangaa Beenishaangul Gumuzitti 'guyyaa tokko qofa Poolisoonni Oromiyaa 10 ajjeefaman’
Madda suuraa, Oromia Police College/Facebook
Gaafa Kibxataa rakkoo daangaa Oromiyaafi Benishaangul Gumuuzitti dhalateen poolisoonni Oromiyaa ajjeefamuu qondaalli Komishinii Poolisii Oromiyaa BBC'tti himan.
''Kaleessaa mataa isaa gara nama kudhaniiti [kan ajjeefame]. Sana durammoo torba kan ani beekus ni jira. Garuu, walumaa gala lakkoofsi [poolisoota ajjeefamanii] kana caala,'' jedhan hogganaan kominikeeshinii Komishinii Poolisii Oromiyaa, Komishinar Soorii Dinqaa.
Qaamonni kana raawwatan ''Daangaa Oromiyaa keessa seenaniiti kan isaan tarkaanfii fudhachaa jiran,'' jedhaniiru.
''Hidhattoonni kaleessa humna keenya 30 hin caalle irratti tarkaanfii fudhatan 250 hanga 300 ta'a'' kan jedhan komishinar Sooriin, baay'ee rakkoo guddaa akka ta'e himu.
''Bakka baqannee jirrutti gadda nama saddeetii taa'aa jirra''
''Humni kuni kan Benishaangul jennee ilaaluun hin danda'amu. Meeshaa gurguddaatiini ijoolleetti dhukaasaa kan turani.''
Humni meeshaa gurguddaa hidhatee daangaa qaxxaamuree poolisii Oromiyaafi uummata haleelaa jiru kun qaama ''ta'ee jedhee qindeessee abbummaadhaan opireeshinii gaggeessutu jira" jedhu.
"Isaan alatti deeggarsi ni taasifamaaf jennee shakkina, irratti hojjataas jirra'' jedhu.
''Tarii meeshaa wal madaaluu ta'uu dhiisuu danda'a malee Poolisiin Oromiyaa hir'ina meeshaa hin qabu" jedhu qondaalli poolisii Oromiyaa kuni.
Haa ta'u malee, ''Saasiggarraa ka'e hanga Haroo Limmuutti'' rakkoon wanta turef humna poolisiin to'achuun rakkoo akka ta'e dubbatu.
Gama mootummaatin, yeroo ammaa ''Ummanni daangaa isaa akka eeggatu gochaa jirra,'' jedhu qondaalli Poolisii kuni.
"Mootummaan naannolee lamaanii mariirra jiru, humni raayyaa ittisa biyyaafi poolisiin Federaalaa bobba'ee jira" jedhu.
Kanaan dura hoggantoonni naannolee lamaanii rakkoo kana furuuf marii'atanii waligaluun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee, ajjeechaan itti fufeera.
Torban darbellee maatii nama tokko saddeet dabalatee namoonni 40'tti siqan magaalaa Yaasootti ajjeefamuu qondaaltonni himani ture.
Madda suuraa, Oromia Police College
Erga Fulbaana darbe qondaaltonni Kaamashii afur daandiirratti ajjefamani as lammiileen hedduu yeroo ajjeefaman kuma 100,000tti kan siqan immoo qe'ee irraa buqqa'aaniiru.
Gama kaaniin, ogeeyyiin fayyaa Hospitaalaa Rifaraala Naqamtee ajjeechaa itti fufee raawwatu mormuun guyyaa har'aa ganama hiriira bahaniiru.
Hospitaalicha irraa Dr Daamxoo Gaarradoo akka nutti himanitti, gaafa Wiixataa kora bittinneessaa lamaafi jiraataa lama akkasumas guyyaa kaleessaa reeffi kora bittineessaa jaha'' hospitaala Naqamtee dhufuu isaanii himaniiru.
Ajjeechaa itti fufeen ''hawaasa tajaajiluu hin dandeenye, hojiin keenya reeffuma lakkaa'uu ta'e'' kan jedhan Dr. Daamxoon, mootummaan xiyyeeffannaa akka itti kennu hiriira bahuu isaanii BBC'tti himaniiru.
Ajjeechaa maatii namoota saddeeti Yaasootti 'raawwate'
Benishaangul Gumuz: Hoggantoonni godina Kamashii hidhattootaan ajjeefaman
28 Fuulbaana 2018
Dubartii maatii mootii qeequun hidhaa waggaa 43’n adabamte